UN Special Rapporteur on Negative Impact of Unilateral Coercive Measures on Human Rights, Alena Douhan, speaks during a news conference in Caracas
Nhumwa yeUnited Nations, UN, Amai Alena Douhan, avo vari munyika umo mavari kuongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzevanhu uye kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira zviri kuvhiringa zvakadii raramo yeveruzhinji munyika vakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe.
Mugwaro raburitswa neUnited Nations nhasi, Amai Douhan vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira zvinofanira kubviswa vachiti zvirango izvi zviri kukanganisa zvakanyanya magariro everuzhinji munyika.
Amai Douhan vakurudzirawo kuti munyika muitwe nhaurirano dzemandorokati dzekugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika, kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekutevedzwa kwemitemo munyika.
Vatiwo mitemo inobata sarudzo pamwe nezvematongerwo inyika inofanirwa kuvandudzwa zvizere.
Amai Douhan vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukanganisa zvakanyanya kukura kwehupfumi hwenyika, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu dzinosanganisira kuwana chikafu, hutano hwakanaka, mvura yokunwa yakachena, dzidzo pamwe nekuwanikwa kwemabasa nezvimwe.
Amai Douhan vatiwo zvirango izvi zviri kutadzisawo makambani kuti akwanise kuwana mari kubva kunzekwenyika uye zvirango izvi zviri kukonzerawo kuwanda kwenyaya dzehuori pamwe nechikiribidi mukufambiswa kwemari kana kuti money laundering.
Mutauriri weMDCT, VaWitness Dube, vati vari kufara nedanho ratorwa neUN vachiti sebato vagara vachikurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe.
Asi mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaMarvelous Khumalo, vati vakatyamara zvikuru negwaro reUN iri vachiti Amai Douhan havana kusangana nevanhu vakawanda munyika kuti vanyatsoona mamiriro akaita zvinhu munyika kuti vazobuda nezvaturwa neUN izvi.
VaKhumalo vati havaone nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzichibvisa zvirango izvi vachiti United Nations haisiriyo yakaisa zvirango izvi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vaudza Studio 7 vari kuLondon kuti zviri kutaurwa naAmai Douhan ndezvemugotsi matsuro vachiti zvakasakisa kuti zvirango izvi zviiswe hazvisati zvagadziriswa.
Vakafanobata chigaro chemutauriri weZanu PF, VaMike Bimha, vati vari kufara zvikuru kuti nyaya yezvirango izvi inyaya yakwira makata vachiti kunyange hazvo Zimbabwe yakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira hurumende iri kuedza pose painogona napo kuti veruzhinji vawane raramo yakanaka.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weMDC Alliance, Muzvare Fadzai Mahere, kuti tinzwe kuti vanotambira sei zvataurwa naAmai Douhan sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.
Asi munyori anoona nezvinoitika kunze kwenyika mubato iri, Muzvare Gladys Hlatywayo, vakaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuona kuti kodzero dzevanhu dzacherechedzwa, mhirizhonga yapedzwa munyika uye mutungamiri webato ravo, VaNelson Chamisa, varegedzwa kuteverwa nevasori nenhengo dzeZanu PF dziri kuvakanganisa kuita misangano nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzemuna 2023.
Amai Douhan, avo vakakokwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kuti vazoona kuti zvirango zvakanganisa zvakadii raramo yeveruzhinji munyika, vakatarisirwa kutura gwaro rizere kumusangano weUnited Nations Human Rights Council uchaitwa muna Gunyana wegore rinouya zvichitevera rwendo rwavo muZimbabwe urwo rwuri kupera mangwana.
America inoti zvirango izvi zvichabviswa chete kana vanhu vari pazvirango izvi vachinja maitiro avo.
Pane vanhu vanodarika makumi masere vari pazvirango zvehupfumi pamwe nekurambidzwa kushanyira America vanosanganisira mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa.